မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားကြသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Society & Lifestyle » မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားကြသူများ
Posted by ခင်ခ on Jul 20, 2012 in Society & Lifestyle | 8 comments
တိုင်းပြည်တိုင်း တိုင်းပြည်တိုင်း မှာ တပ်မတော်(စစ်တပ်)ဆိုတာရှိကြပါတယ်။ အဲဒီတပ်မတော်ထဲဝင်ရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်၊ တပ်သား စသည့် စစ်သည်တွေအားလုံးဟာ တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြုံလာတဲ့အခါ မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားကြဘဲ အသက်ကိုစွန့်လွှတ်စွန်စား တိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြမှာပါ၊ အဲဒီလို မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ တိုင်းပြည်အတွက်စွန့်လွှတ်စွန့်စားသည် စစ်သည် သူရဲကောင်းတွေကို တိုင်းပြည်ကအသိမှတ်ပြုချီးကျူးကြတာကိုလည်း သတင်းတွေ၊ မီဒီယာတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ တွေ့မြင်ကြပါလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အခုဟာက ဖော်ပြခဲ့တဲ့ စစ်သည်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး မိမိအသက်ကိုပဓာနမထားကြသူတွေကတော့ မန္တလေးမှာ ယာဉ်စည်းကမ်းမလိုက်နာဘဲ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဆိ်ုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းဘဲ သွားလာကြသူများဖြစ်ပါတယ်၊ များသောအားဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေများသလို တစ်ခါတရံလူကြီးပိုင်းတွေပါ တွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တော့ ဘယ်လိုမှစဉ်းစားမရဘူး၊ မတော်တဆဆိုတာ ကြိုတင်ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပြီးမှ တွေ့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေ၊ မနေ့က ကိစ္စရှိလိုညနေခင်းလောက် မြို့ထဲကားနဲ့ရောက်လာရင်လှမ်းတွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက ၇၃လမ်း နဲ့ ၃၂ လမ်းထောင့်မှာ ၇၃လမ်းအတိုင်း တောင်ဘက်မှမြောက်ဖက်သို့မောင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းထားတဲ့ လူငယ်မိန်းခလေး(၂)ယောက် အရှိန်နဲ့ မောင်းလာနေတုံး ၃၂လမ်းကထွက်ပြီး အရှေ့ကနေအနောက်တည့်တည့် ၇၃လမ်းကိုဖြတ်မယ့် လူငယ်ကောင်ကလေးတစ်ယောက် မောင်းလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်တို့ မတော်တဆ တိုက်ကြပါလေရော၊ လူငယ်ကောင်ကလေးလည်း ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မပါဘူးလေ၊ ဆိုင်ကယ်(၂)စီးတိုက်ပြီး လွင့်စင်လဲသွားကြတော့ လူငယ်ကောင်ကလေးက ခေါင်းနဲ့လမ်းဘေးပလပ်ဖောင်းနဲ့ တိုက်မိပြီးခေါင်းကသွေးတွေစီးလို့ သတိမေ့နေတယ်၊ လူငယ်မိန်ခလေးတစ်ယောက်က နဖူးမှာသွေးတွေထွက် နေတယ်၊ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ လက်တွေမှာပွန်းလို့ပေါ့၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တပ်မတော်ထဲဝင်တဲ့သူတွေက တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ကို ပဓာနမထားကြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ အခုလိုမတော်တဆဆိုတာ ကြိုသိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တော့ ဆောင်းပေးစေချင်ပါတယ်၊ တစ်ချို့ကရှိသေးတယ် ဦးထုပ်ကိုဆောင်းတော့ဆောင်းတယ် မေးသိုင်းကြိုးမတတ်ဘူး၊ ဒါလဲမဆောင်းတာနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူး လေပြင်းတိုက်ရင်တောင် လွင့်ကျတတ်တာ ဆိုင်ကယ်တိုက်လိုလဲမှတော့ လူတခြား ဦးထုပ်တခြားဖြစ်ပြီပေါ့၊ အခုဟာက လမ်းပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်တွေကလည်း လိုင်စင်လုပ်ပေးနေတော့ အရင်ကထက်ပိုများပြားရှုပ်ထွေးနေပြီလေ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေတဲ့ မန္တလေးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးကြပြီး မိမိအသက်ကို ပဓာနမထားကြသူများ များစွာတွေ့မြင်နေရပါကြောင်း သူတို့က စစ်သည်၊စစ်သားမဟုတ်ဘူးနော်၊ အကယ်၍ မန္တလေးကိုတစ်ခေါက်တစ်ခါအလည်ရောက်ကြရင်ဖြင့် ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဆိုင်ကယ်စီးသူရဲကောင်းတွေ( အသက်ကိုပဓာနမထားလို့ တင်စားတာပါ)တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။
တနိုင်ငံလုံး အဲ့အတိုင်းဘဲ အကိုရေ။ကျနော်လဲ သိပ်မဆောင်းဖြစ်ဘူးးးးး
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဦးထုပ်တကယ့်ကို ဆောင်းသင့်ပါတယ်
ဆိုင်ကယ်စီးရင် ဦးထုပ်မဖြစ်မနေဆောင်းသင့်တာ အမှန်ပါဘဲ…
စက်ဘီး ဆိုက်ကား ဆိုင်ကယ် ကား
အကုန်နီးပါး ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ဆိုတာကို မေ့ထားတဲ့အနေအထားမှာ
ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်း မဆောင်းခြင်း ဟာ သိပ်မထူးတော့သလိုပါဘဲ…
သိပ်မကြာသေးမှီအချိန်က ၊ ရွာထဲက ရွာသားတစ်ဦး ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းပြီး သူ့ ဟာသူ ပုံမှန်လေး ဆိုင်ကယ်မောင်းနေတာကို တစ်ဘက်က ဆိုင်ကယ်က ဝင်တိုက်လို့ ခံလိုက်ရတာ လက်တွေ့ ပါ။
စကားမစပ် ဆိုင်ကယ်မောင်း/စီးတဲ့သူတွေ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်မဆောင်းရင် ဒဏ်ငွေ၃သိန်းကျပ် အထိ ဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ ၊ ကျုပ်ကတော့ ဆောင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျောင်းသားတွေ အတန်းဆင်းရင် ဦးထုပ်ဆောင်း၊ဦးထုပ်ဆောင်း၊
မေးသိုင်းကြိုးတပ်၊မေးသိုင်းကြိုးတပ်…. ဂါထာရွတ်သလိုကို လိုက်ပြော
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် ခေါင်းဆောင်းမပါရင်…အများဆုံး၂၅၀ဒေါ်လာပေးရမယ်တဲ့..။ စက်ဘီးမှာခေါင်းဆောင်းမပါရင်.. ၂၅ဒေါ်လာလို့ကြားဖူးတယ်..။
အောက်မှာဥပဒေ..။ ကော်ပီလုပ်ပြီး တကယ် သုံးဆွဲနိုင်စေ..။
“(a) A driver and any passenger shall wearasafety helmet meeting requirements established pursuant to Section 27802 when riding onamotorcycle, motor-driven cycle, or motorized bicycle. “(b) It is unlawful to operateamotorcycle, motor-driven cycle, or motorized bicycle if the driver or any passenger is not wearingasafety helmet as required by subdivision (a). “(c) It is unlawful to ride asapassenger onamotorcycle, motor-driven cycles, or motorized bicycle if the driver or any passenger is not wearingasafety helmet as required by subdivision (a). “(d) This section applies to persons who are riding on motorcycles, motor-driven cycles, or motorized bicycles operated on the highways. “(e) For the purposes of this section, ‘wearasafety helmet’ or ‘wearingasafety helmet’ means havingasafety helmet meeting the requirements of Section 27802 (see :Standards” below) on the person’s head that is fastened with the helmet straps and that is ofasize that fits the wearing person’s head securely without excessive lateral or vertical movement. “(f) In enacting this section, it is the intent of the Legislature to ensure that all persons are provided with an additional safety benefit while operating or ridingamotorcycle, motor-driven cycle, or motorized bicycle.”
“(1) Evidence of fraud or persistent neglect.
“(2) The violation presents an immediate safety hazard.
“(3) The violator does not agree to, or cannot, promptly correct the violation.”
” . . . it is clear the law requires only that the consumer wearahelmet bearingacertification of compliance.” Buhl v. Hannigan 16 Cal.App. 4th 1612 (1993).
” . . . the statement in Buhl that consumer compliance with the state law only requires the consumer to wearahelmet bearing the DOT self-certification sticker does not apply whenahelmet has been shown not to conform with federal standards and the consumer has actual knowledge of this fact.” Bianco v. California Highway Patrol, 24 Cal.App. 4th 1113 (1994).
သူကြီးရေ၊ ဒီမှာလည်းဒါဏ်ငွေသတ်မှတ်ထားပေမယ့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရှိရင်သာ အဲဒီရှေ့ဖြတ်မောင်းတုံး ဆောင်းကြတာ၊ ကျန်တဲ့နေရာမှာ မဆောင်းတာက ခပ်များများပါဗျာ။ကိုယ်ဖြစ်ရင် ကိုယ်ခံရမှာကို ကြို မတွေးကြဘူးထင်ပါတယ်။
အလှအတွက် အသက်နဲ့ ရင်းပြီးလောင်းကြေးထပ်ကြည့်တာပါ။